ZawHpone - Profile
Zaw Hpone Laminate Flooring Co.,Ltd
Location :No.978, Tan Thu Mar Road,5Ward, South Okkalapa Tsp., Yangon, Myanmar.
Main Products :Laminate Flooring
Company Description :Mingalarbar!
Zaw Hpone was founded in 2003 and started by Korea Parke Business.
Since 2013, Changed into Zaw Hpone Company Limited and had over 10 years experiences by selling the best qualities products from Malaysia and Taiwan.
Our import product of Laminate Flooring can water-resistance about 24 hours, Life-Time Service and also for renovation services.
Free Product services available due to product services warranty ,user fault or company installation. Wood covered laminate 10 inches &9feet’s partition board will be available asafuture plan. Customers can get our products at the branches of Mandalay , Taunggyi and Nyaung Shwe.
Mandalay : No.G2/162, Sabi Street, between 71 & 72,Chan Mya Tharsi Tsp,Mandalay.
Phone : 09-5089807, 09-450055640, 09-450023053, 09-450031629, 09-31269000
Taunggyi : Near Education College Apartment,Horse Statue Junction,Bogyoke Road,Taunggyi Township.
Phone : 09-5089807, 09-450055640, 09-450023053, 09-450031629
Nyaung Shwe : No.(5), Kan Tha Ward, Zay Lay Sade Street, Nyaung Shwe Township.
Phone : 09-5089807, 09-450055640, 09-450023053, 09-450031629, 09-41002715
ZawHpone ကို 2003 ခုနှစ်မှ စတင်တည်ထောင်ပြီး ကိုရီးယားပါကေးလုပ်ငန်းဖြင့် စတင်ခဲ့ပါသည်။
2013 ခုနှစ်မှစပြီး ZawHpone Company အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပြီး မလေးရှား၊ ထိုင်ဝမ်မှ အရည်အသွေး ကောင်းမွန် မှန်ကန်သော ပစ္စည်းများကို မှာယူတင်သွင်းပြီး စျေးကွက်အတွင်းသို့ ရောင်းချခဲ့သည်မှာ ယခုဆို (၁၀)စုနှစ်ကျော် ရပ်တည်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ZawHpone မှ တင်သွင်းသော Laminate Flooring များသည် ရေထဲသို့ 24နာရီစိမ်လို့ရပါသည်။ ၀န်ဆောင်မှုအနေဖြင့် Life Time ပေးထားပြီး Renovation Services ကိုလည်း Life Time ပေးထားပါသည်။ Product Services Warranty မှာ ပစ္စည်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အသုံးပြုသူ၏အမှားကြောင့်ဖြစ်စေ၊ Company Installation အဆင်မပြေမှုကြောင့်ဖြစ်စေ ဝန်ဆောင်မှု အခမဲ့ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ZawHpone မှ Future Plan အနေဖြင့် သစ်သားချောင်းအစစ် ပေါ်မှ Laminate အုပ်ဖို့ တင်သွင်းစီစဉ်နေပြီး Partition Board များကိုလည်း ၁၀လက်မ၊ ၉ပေအရှည် တင်သွင်းမည်ဖြစ်သည်။ ZawHpone ၏ နယ်ရုံးခွဲများဖြစ်သော မန္တလေး၊ တောင်ကြီး၊ ညောင်ရွှေတို့တွင် ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။